Turkiga oo hor-istaagayo dadka qaxootiga ah ee uu Gariigga dib u soo celinayo | HalQaran.com
Home Caalamka Turkiga oo hor-istaagayo dadka qaxootiga ah ee uu Gariigga dib u soo...
Ankara (Halqaran.com) – Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ciidamo tiradoodu gaareyso 1,000 askari u direyso xadka ay la wadaagto Giriigga, si ay u hakiyaan howlgallada ay Giriigga dib ugu soo riixayaan qaxootiga ka gudbay dhinaca Turkiga.
Waxaa jirta cadaawad dhinaca gudaha ah oo abuurantaya kaddib markii uu billowday qulqulka cusub ee Qaxootiga.
Mr Soylu ayaa ciidamada Giriigga ku eedeeyay inay dhaawaceen 164 ruux oo ka mid ah dadka gaaray xadka.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in hal nin uu dhaawac aad u culus soo gaaray markii ay ciidamada Giriigga Arbacadii rasaas ku fureen dadka qaxootiga ah.
Dowladda Giriigga ayaa beenisay arrintaas, iyo eedeymo kale oo ku aaddanaa in 2 qof oo Suuriya u dhashay lagu dilay toogasho ka dhacday xadka.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku dooday in go’aanka uu xadkiisa ku furay uu si buuxda u waafaqsan yahay sharciga caalamiga ah.
Saraakiil sare oo ka tirsan Midowga Yurub ayaa booqday aaggaas, waxayna ballan qaadeen inay Giriigga ku gacan siin doonaan sidii uu sare ugu qaadi lahaa amniga.
Madaxweynaha golaha Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa Giriigga ku qeexday inuu yahay “Gaashaanka Yurub”, iyadoo u adeegsatay erayga luuqadda Giriigga ee “aspida“.